ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီသစ်မှာ ဘယ်အသင်းတွေ ရေပန်းစားနေကြလဲ - BBC News မြန်မာ
ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီသစ်မှာ ဘယ်အသင်းတွေ ရေပန်းစားနေကြလဲ
Image caption ရမှတ် ၉၈မှတ်ရပြီး ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲတွေစပြီး ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်တွေ ပွဲတွေ ပြန်ကန်ကြပါပြီ။ ရာသီသစ် မစတင်မီ အင်္ဂလန် အပြောင်းအရွှေ့ကလည်း ပိတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်လို့ ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်အသင်းက အတောင့်တင်းဆုံးလဲ၊ ဘယ်အသင်းက အကောင်းဆုံး ခေါ်ယူမှုလဲ၊ ဘယ်အသင်းက ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းအစားဆုံးလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Image caption ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပတ်ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးကို ဘယ်အသင်း တားဆီးမလဲ
မန်စီးတီး ( ရေပန်းစားမှု - ၁)
ပတ်ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးဟာ ဒီနှစ်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၃နှစ်ဆက် ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရေးပန်းစားနေပါတယ်။ ရာသီအကြို ခြေစမ်းပွဲ ၄ပွဲသာ ကစားခဲ့ပေမယ့် ပတ်ရဲ့ အသင်းက ဒီနှစ်မှာလည်း မနှစ်ကလို အောင်မြင်မှုမျိုး ရနိုင်မယ့် လူစာရင်း၊ ကစားပုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပါ။ ကွန်မြူနတီ ဒိုင်းလုပွဲမှာ မန်စီးတီးရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို မတွေ့ရပေမယ့် အနိုင်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ဆဲပါ။ ရာသီအဖွင့်မှာ လီဗာပူးလ်က နော့ဝစ်ချ်ကို ဂိုးပြတ်နိုင်ချိန်မှာ ပတ်ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးကလည်း အဝေးကွင်းမှာ ဝက်စ်ဟမ်းကို ချန်ပီယံ ခြေစွမ်းအပြည့်ပြပြီး ၅ဂိုးပြတ်နဲ့ နိုင်ပါတယ်။ စလာတင် ၃ဂိုးသွင်းခဲ့သလို၊ တိုက်စစ်မှူးတွေလည်း ဂိုးရခဲ့တဲ့ပွဲပါ။ မန်စီးတီးမှာ အသစ်ခေါ်ထားတဲ့ ရိုဒရီက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အသားကျဖို့ မလိုတော့သလို သူ့ရဲ့ ကစားပုံကလည်း မန်စီးတီး လိုချင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ ကန်ဆယ်လိုကို ခေါ်ထားသလို ကိုလ် ဝေါ်လ်ကာလည်း အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြနေဆဲပါ။ ဆာနေ ဒဏ်ရာကြောင့် ၇ လလောက် မပါနိုင်ပေမယ့် မားရက်ဇ်က ဒီနှစ်မှာ ပိုပြီး အားကိုးရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲရှိတာ ကွန်ပနီ မရှိတော့တဲ့ ခံစစ်ပိုင်းဟာ ပတ်ဂွါဒီယိုလာ အသင်းရဲ့ အားနည်းဆုံးနေရာ ဖြစ်လာနိုင်တာကလွဲရင် မန်စီးတီးဟာ ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ရဖို့ အကောင်းဆုံး အသင်းအဖြစ် ရေပန်းစားနေပါတယ်။
မန်စီးတီး - ပေါင် ၁၃၄.၈သန်း
၁) ရိုဒရီ - ပေါင် ၆၂.၅သန်း ( အက်သလက်တီကိုမှ)
၂) ကန်ဆယ်လို - ပေါင် ၆ဝသန်း ( ဂျူဗင်တပ်စ်မှ)
၃) စတက်ဖန် - ပေါင် ၇ သန်း ( ကိုလံဘတ်ခရူမှ)
၄) အန်ဂျယ်လီနို - ပေါင် ၅.၃သန်း ( ပီအက်စ်ဗီမှ)
၅) စကော့ကာဆန် - အငှား ( ဒါဘီမှ)
Image caption ဒီရာသီမှာလည်း စီးတီးရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဖက် ဖြစ်လာမယ့် လီဗာပူးလ်
လီဗာပူးလ် ( ရေပန်းစားမှု -၂)
ယာဂမ်ကလော့ပ်ရဲ့လီဗာပူးလ် ခြေစွမ်းကို ကွန်မြူနတီဒိုင်းလုပွဲမှာ တွေ့ခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို နော့ဝစ်ချ်နဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲမှာလည်း သူ့အသင်းဟာ အရင်လို တောင့်တင်းဆဲ ဆိုတာကို ပြသနေဆဲပါ။ အသင်းလိုက် ကစားပုံကောင်းပြီ မနှစ်ကလိုမျိုး မန်စီးတီးကို ဖိအားပေးနိုင်မယ့် ခြေစွမ်းမျိုးရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆာလ၊ မာနေ၊ ဖာမီနိုတို့ ၃ဦးအပြင် အိုရီဂီ ကလည်း အားကိုးရမယ့် တိုက်စစ်မှူးဖြစ်လို့ လီဗာပူးလ်အတွက် ဂိုးဆိုတာ မခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ပါ။ လီဗာပူးလ် အောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိက အသက်က တောင်ပံတွေဖြစ်သလို ခံစစ်ပိုင်းလည်း အရေးပါခဲ့တာပါ။ နော့ဝစ်ချ်နဲ့ပွဲမှာ အဓိက ဂိုးသမား အလီဆင် ဒဏ်ရာ ရသွားတာက ယာဂမ်ကလော့ပ်ကို ခေါင်းခဲ စေနိုင်တာပါ။ ၆ပတ်လောက် နားရမယ့် အလီဆင်ကြောင့် အသင်းမရှိသေးတဲ့ ဂိုးသမား တစ်ဦးကို ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ၆ပတ်အတွင်းမှာ အလီဆင်ဟာ လီဗာပူးလ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ စူပါဖလားအပြင် အာဆင်နယ်၊ ချယ်လ်ဆီးတို့နဲ့ ကန်မယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ၂ပွဲနဲ့ ပွဲပေါင်း ၁၁ပွဲ လောက်အထိ လွဲနိုင်တာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလော့ပ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ လီဗာပူးလ်ဟာ မန်စီးတီးလောက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အနေအထားမှာ မရှိပေမယ့် ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ချန်ပီယံ ဆုဖလားရဖို့ နောက်ဆုံး အချိန်အထိ တိုက်ပွဲဝင်မှာ သေချာပါတယ်။
လီဗာပူးလ် - ပေါင် ၄.၄သန်း
၁) ဗန်ဒါဘတ် - ပေါင် ၁.၃သန်း (PEC Zwolle မှ)
၂) အီလီယို - ပေါင် ၃.၁သန်း ( ဖူလ်ဟမ်မှ)
၃) အက်ဒီယန် - အလွတ်
Image caption မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူးလ်ကို ဖိအားပေးဖွယ်ရှိတဲ့ စပါး
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး ( ရေပန်းစားမှု - ၃)
မနှစ် ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်အထိ တက်ခဲ့တဲ့ ပိုချက်တီနိုနဲ့ စပါးအတွက်တော့ ပေါင်သန်း ၁ဝဝကျော် သုံးပြီး အသင်းကို အားဖြည့်ထားပါတယ်။ အဓိက ကစားသမား တွေထဲမှာ အဲရစ်ဆင် တစ်ယောက်ကိုပဲ ဆုံးရှုံးရနိုင်မယ့် အနေအထားရှိပေမယ့် အန်ဒွန်ဘီလီ၊ လိုဆယ်ဆို၊ ဆက်ဆီညော်တို့ကို အားဖြည့်ထားတာကြောင့် တောင့်တင်းတဲ့ အသင်းကို ပိုင်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ရပေမယ့် ဟယ်ရီကိန်း၊ အန်ဒွန်ဘီလီတို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ နိုင်ခဲ့သလို နောက်ဆုံးအချိန်အထိ မလျော့ဘဲ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားအားကိုတော့ အသိမှတ်ပြုရမှာပါ။ နောက်ပြီး ဟယ်ရီကိန်း ဒဏ်ရာ ကင်းစင်နေရင် စပါးဟာ ထိပ်က နှစ်သင်းကို အဓိက ဖိအားပေးမယ့် အသင်းပါ။ တစ်ခုပဲ စိုးရိမ်ရမှာက ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ အဲရစ်ဆင် ဝင်လာမှ စပါး ကစားပုံပြောင်းသွားတာပါ။ တိုက်စစ်ပိုင်း အတွက် သူက နေရာလွတ်တွေကို ရှာပေးတဲ့သူဖြစ်ပြီး အရေးပါတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ စာချုပ် တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့ အဲရစ်ဆင် တစ်ယောက် အသင်းက ထွက်ခွာခဲ့ရင်တော့ စပါး ရုန်းကန်ရမှာ သေချာပါတယ်။
တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး - ပေါင် ၁၅၆. ၅သန်း
၁) အန်ဒွန်ဘီလီ - ပေါင် ၆၃သန်း ( လီယွန်မှ)
၂) လိုဆယ်ဆို - ပေါင် ၅၅သန်း ( ဘက်တစ်မှ)
၃) ဆက်ဆီညော် - ပေါင် ၃၀ သန်း ( ဖူလ်ဟမ်မှ)
၄) ဂျက် ကလာ့ - ပေါင် ၈သန်း ( လိဒ်စ်မှ)
Image caption ပထမဆုံးအကြိမ် ပေါင် သန်း ၁၀၀ကျော် သုံးခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ် ( ရေပန်းစားမှု - ၄)
အပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်မတိုင်မီ အာဆင်နယ်ဟာ အဆင့် ၄အတွင်း ဝင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အသင်းလို့ သတ်မှတ်ထားကြပေမယ့် ကစားသမားတွေ ခေါ်ယူအပြီးမှာတော့ ရေပန်းစားမှု တက်လာခဲ့တာပါ။ အူနိုင်းအမ်မရီ လက်ထက်မှာ အာဆင်နယ် တိုးတက်လာပေမယ့် ခံစစ်ပိုင်းကတော့ အဓိက ပြုပြင်ရမယ့် အချက်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါးဗစ်လု့ဇ်ကို ခေါ်ခဲ့သလို ကီရန် တယ်နီကိုလည်း အားဖြည့်ထားတဲ့ ခံစစ်က မနှစ်ကထက် ပိုကောင်းလာမှာ သေချာသလို ပက်ပေ ကိုခေါ်လိုက်တာက အာဆင်နယ် တိုက်စစ်ကလည်း ဂိုးရဖို့ ပိုလွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီကုန်ခါနီးမှ ခြေစွမ်းကျသွားတဲ့ အနေအထားမျိုးကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုသလို အကောင်းဆုံး ခံစစ်အတွဲကို အူနိုင်းအမ်မရီ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ရင် ဒီနှစ်ဟာ အာဆင်နယ်အတွက် အဆင့် ၄အတွင်း ပြန်ဝင်လာနိုင်မယ့် ရာသီ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အာဆင်နယ် - ပေါင် ၁၃၈သန်း
၁) နီကိုလပ်စ် ပက်ပေ - ပေါင် ၇၂သန်း ( လီလ်မှ )
၂) ဝီလျံ ဆလီဘား - ပေါင် ၂၇ သန်း ( စိန့်အက်တီယန်မှ)
၃) ကီရန် တယ်နီ - ပေါင် ၂၅သန်း ( ဆဲလ်တစ်မှ)
၄) ဒါးဗစ်လု့ဇ် - ပေါင် ၈သန်း ( ချယ်လ်ဆီးမှ)
၅) ဂါဘရီရယ် မာတင်နယ်လီ - ပေါင် ၆သန်း ( အီတွာနိုမှ)
၆) ဒါနီ ဆီဘာယော့စ် - အငှား ( ရီးယဲယ်မှ)
Image caption အားနည်းနေတဲ့ ခံစစ်ပိုင်းကို အဓိက အားဖြည့်ထားတဲ့ မန်ယူ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ( ရေပန်းစားမှု - ၅)
စပါး၊ အာဆင်နယ် တို့နဲ့အတူ အဆင့် ၄အတွင်း ဝင်ဖို့ ဆိုးလ်ရှား ပစ်မှတ်ထားရမယ့် ရာသီပါ။ တိုက်စစ်ပိုင်းက လူကာကူနေရာ အစားမထိုးနိုင်တာက ယူနိုက်တက်အတွက် ရေရှည်မှာ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အားနည်းနေတဲ့ ခံစစ်ပိုင်းအတွက် ဟယ်ရီ မက်ဂွိုင်းယားနဲ့ ဝမ်ဘစ်ဆာကာတို့ကို အားဖြည်တာကတော့ ခံစစ်ကို လုံခြုံစေမှာ သေချာပါတယ်။ စျေးကွက် မပိတ်ခင် ပေါ့ပ်ဘာကို ထိန်းထားနိုင်ရင် ယူနိုက်တက်နဲ့ ဆိုးလ်ရှားအတွက် ရာသီကောင်း တစ်ခုကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပုံစံကောင်းကို ပြန်တွေ့ခဲ့ရသလို လူငယ်တွေကလည်း အသင်းအတွက် အရေးပါလာနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက မနှစ်ကထက် အိမ်ကွင်းမှာ အမှတ် ပိုရဖို့ လိုအပ်နေသလို တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ ရပ်ရှ်ဖို့ဒ်၊ မာရှယ်လ်၊ ဆန်းချက်တို့ ဒဏ်ရာ ကင်းစင်နေရင် ယူနိုက်တက် အဆင့် ၄ နေရာ အတွင်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် - ပေါင် ၁၄၈သန်း
၁) ဟယ်ရီ မက်ဂွိုင်းယား - ပေါင် ၈ဝသန်း ( လက်စတာမှ)
၂) ဝမ်ဘစ်ဆာကာ - ပေါင် ၅ဝသန်း ( ပဲလေ့စ်မှ)
၃) ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် - ပေါင် ၁၈သန်း ( ဆွမ်ဆီးမှ)
Image caption ဟားဇက်ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးရမယ့် ချယ်လ်ဆီး ကစားသမားသစ် ပူလီဆစ်
ချယ်လ်ဆီး ( ရေပန်းစားမှု - ၆)
ကစားသမား ခေါ်ယူခွင့် ပိတ်ခံထားရသလို ဟားဇက်၊ ဒါးဗစ်လု့ဇ်တို့လို အသင်းရဲ့ အဓိကလူတွေ ထွက်သွားတဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ လမ်းပတ်အတွက် ခက်ခဲတဲ့ ရာသီကို ဖြတ်သန်းရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ပရီးမီးယားလိဂ်လို ခက်ခဲတဲ့ လိဂ်မှာ လမ်းပတ်တစ်ယောက် အဆင့်အသင့် ဖြစ်ပါ့မလား၊ သူ့အပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ များနေသလို လက်ရှိ လူစာရင်းကို နည်းပြသစ် ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ ခန့်မှန်းရခက်နေဆဲပါ။ ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အားကိုးနေရတဲ့ ဟာဇက် မရှိတော့တာက ဂိုးရဖို့ အတွက် အဓိက အခက်အခဲ ဖြစ်လာနိုင်သလို လူငယ် တိုက်စစ်မှူး အေဘရာဟမ်နဲ့ ဂျီရူးတို့ကလည်း ထိပ်တန်း အဆင့်မဟုတ်လို့ ချယ်လ်ဆီးကို ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်ရမယ့် အသင်းထဲကနေ မီဒီယာတွေက ထုတ်ပယ်ထားကြတာပါ။ အသစ်ခေါ်ထားတဲ့ ပူလစ်ဆစ်ရဲ့ ခြေစွမ်းကို စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်သလို လူငယ်တွေက လမ်းပတ်ရဲ့ အသင်းမှာ ဘယ်လောက်အထိ အားကိုးရမလဲက ဒီနှစ် ချယ်လ်ဆီးအသင်း အောင်မြင်မှုတွေရဲ့ အဓိက အချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီး - ပေါင် ၄ဝသန်း
၁) ကိုဗာဆစ် - ပေါင် ၄ဝသန်း ( ရီးယဲယ်မှ အပြီးသတ်ခေါ်)
ထိပ်သီး ၆သင်းရဲ့ အပြင်ဖက်မှာတော့ အဲဗာတန်၊ လက်စတာ၊ ဝုလ်ဖ်၊ ဝက်စ်ဟမ်းတို့ကလည်း ကစားသမား အသစ် ခေါ်ယူမှုတွေနဲ့ အဆင့် ၆အတွင်း ဝင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေတာ ဖြစ်လို့ ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်က ခါတိုင်းနှစ်တွေထက် ပိုပြီး အကြိတ်အနယ် ရှိမှာ သေချာပါတယ်။
နောက်ဆုံး ၁ဝနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံများ
၂၀၀၉-၁၀ ) ချယ်လ်ဆီး - ၈၆မှတ်
၂၀၁၀-၁၁) မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် - ၈ဝမှတ်
၂၀၁၄-၁၅) ချယ်လ်ဆီး - ၈ရမှတ်
၂၀၁၇-၁၈) မန်စီးတီး - ၁ဝဝမှတ်
၂၀၁၉-၂၀) …… ?
Image caption အသင်းတိုင်း လိုချင်နေကြတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဆုဖလား
ငွေအများဆုံး သုံးတဲ့ အသင်းများ
၁) စပါး - ပေါင် ၁၅၆.၅သန်း
၂) မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် - ပေါင် ၁၄၈သန်း
၃) အက်စတန်ဗီလာ - ပေါင် ၁၄၄.၅သန်း
၄) အာဆင်နယ် - ပေါင် ၁၃၈သန်း
၅) မန်စီးတီး - ပေါင် ၁၃၄.၈သန်း
၆) အဲဗာတန် - ပေါင် ၁၁၈သန်း
၇) လက်စတာ - ပေါင် ၉၁သန်း
၈) ဝက်စ်ဟမ်း - ပေါင် ၇၈သန်း
၉) နယူးကာဆယ် - ပေါင် ၆၅သန်း
၁၀) ဝုလ်ဖ် - ပေါင် ၆၅သန်း
၁၆) ချယ်လ်ဆီး - ပေါင် ၄ဝသန်း
၁၉) လီဗာပူးလ် - ပေါင် ၄.၄သန်း
ချယ်လ်ဆီးဟာ အဓိက ကစားသမား အက်ဒင် ဟားဇက် အပါအဝင် ကစားသမားတွေ ရောင်းချငွေကတော့ စုစုပေါင်း ပေါင် ၂၁၃သန်းအထိ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေထဲမှာ အများဆုံးရခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရောင်းချရငွေ အများဆုံး အသင်း
၁) ချယ်လ်ဆီး - ပေါင် ၂၁၃.၂သန်း
၂) လက်စတာ - ပေါင် ၈ဝသန်း
၃) မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် - ၇၄သန်း
၄) အဲဗာတန် - ပေါင် ၆ဝသန်း
၅) မန်စီးတီး - ပေါင် ၅၈.၁သန်း
၆) အာဆင်နယ် - ပေါင် ၅၅.၅သန်း
၇) ပဲလေ့စ် - ပေါင် ၅ဝသန်း
၈) ဘွန်းမောက် - ပေါင် ၃၆.၅သန်း
၉) ဝက်စ်ဟမ်း - ပေါင် ၃၃.၂၅သန်း
၁၀) နယူးကာဆယ် - ပေါင် ၃၁.ရသန်း